“Jadon Sancho waa sida Neymar Jr oo kale” – Xiddig hore ee kooxda Man United ah – Gool FM
(Manchester) 14 Maajo 2020. Laacibkii hore Manchester United ee Owen Hargreaves ayaa sheegay in xiddiga haatan kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho uu aad ula mid yahay ciyaaryahanka reer Brazil ee Neymar Jr markii uu yaraa.
Magaca Jadon Sancho, oo 20 sano jir ah, ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo Borussia Dortmund marka uu furmo suuqa kala iibsiga ee xagaaga, iyadoo ay jirto inuu xiiso ka helayo kooxaha waa weyn ee qaarada Yurub ah si ay u helaan adeegiisa.
Kooxda Man United ayaa loo arkaa in ay tahay musharraxa ugu cad cad ee gacanta ku dhigi karta adeega Jadon Sancho, maadaama uu xiddigan doonayo inuu markale ku laabto dalka England.
Haddaba laacibkii hore kooxda Manchester United ee Owen Hargreaves ayaa wareysi uu ku bixiyay “talkSPORT” wuxuu ku sheegay:
“Waa riyo aad u qurux badan, wuxuu i xasuusiyaa in badan Neymar Jr markii uu yaraa.”
“Waxa ugu wanaagsan ayaa ah in Jadon Sancho uu ku ciyaari karo qaab hal abuurinimo leh, inkastoo kubadda cagta ay noqotay mid sii qorsheysan, wuxuu sameynayaa qaabkiisa u gaarka ah, tani waa waxa isaga ka dhigaya mid qiimo badan.”
“Marka ay ishu libiqsataba wuxuu sameyn karaa waxyaabo badan oo aysan dadku filan karin, waxyaabo badan oo aysan dadku filan karin, sababtoo ah wuxuu awoodaa inuu horumariyo koox kasta.”
“Lautaro Martínez waa weeraryahan cajiib ah” – Lionel Messi